၂၀၂၁ ခုနှစ် ​မေလထဲမှာ လက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ကိုရီးယား ဇာတ်ကား​ကောင်းများ | News Bar Myanmar
1. “Bossam: Steal the Fate”
ဒီ drama ထဲမှာ​တော့ Jung Il Woo, Yuri, Shin Hyun Soo, Lee Jae Yong, Kim Tae Woo, Song Sun Mi, Myung Se Bin, Lee Joon Hyuk, Shin Dong Mi, So Hee Jung, Yang Hyun Min, Ko Dong Ha နဲ့ Kim Ju Young တို့အပြင် သရုပ်​ဆောင်​ပေါင်းများစွာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
ဂျိုဆွန်း​ခေတ်မှာ အ​ခြေတည်ထားတဲ့ “Bossam: Steal the Fate” drama ဟာ Ba Woo (Jung Il Woo) ဆိုတဲ့ လှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ လူတစ်​ယောက်က တိုင်းပြည်ရဲ့ မင်းသမီးတစ်ပါးကို မ​တော်တဆ ပြန်​ပြေးဆွဲမိသွားရာက​နေစလို့ ဇာတ်ညွှန်း​ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။ Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် Yuri က​တော့ မုဆိုးဖိုဖြစ်တဲ့ မင်းကြီး Gwanghae ရဲ့ သမီး​တော် Soo Kyung ​နေရာက​နေ သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
သူတို့ ၂ ဦးဟာ မှားယွင်းစွာ စတင်​တွေ့ဆုံခဲ့ကြ​ပေမဲ့ ​နောက်ပိုင်းမှာ တစ်ဦးအတွက် တစ်ဦးက ခွန်အားဖြစ်​စေပြီး ကြုံ​တွေ့လာတဲ့ အခက်အခဲ​တွေကို အတူရင်ဆိုင်က​ေျာ်လွှားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို​တော့ ​မေလ ၁ ရက်​နေ့ကစပြီး အပတ်စဉ် စ​နေနဲ့ တနင်္ဂ​နွေ​နေ့​တွေမှာ MBN ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. “Youth of May”
ဒီ drama ထဲမှာ အဓိကပါဝင်သရုပ်​​ဆောင်ထားတာက​တော့ Lee Do Hyun, Go Min Si, Lee Sang Yi, Geum Sae Rok, Oh Man Seok, Kim Won Hae, Uhm Hyo Sup, Hwang Young Hee, Shim Yi Young နဲ့ Park Chul Min တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“Youth of May” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ကိုရီးယားသမိုင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ ၁၉၈၀ ခုနှစ် ​မေလမှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားပြီး ရည်မှန်းချက်​အပြည့် ဇွဲလုံ့လအပြည့်နဲ့ ရှင်သန်​​နေကြတဲ့ လူငယ်တစ်စုရဲ့အ​ကြောင်းကို ပုံ​ဖော်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား Lee Do Hyun က ပြဿနာရှာတတ်​ပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြတဲ့ ​ဆေး​ကျောင်းသား​လေး Hwang Hee Tae အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပြီး မင်းသမီး Go Min Si က​တော့ အခက်အခဲမှန်သမျှ ကြုံ​တွေ့ဖူးတဲ့ လုပ်သက် ၃ နှစ်ရှိတဲ့ နပ်စ်မ​လေး Kim Myung Hee အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီ drama ကို​တော့ ​မေလ ၃ ရက်​နေ့က​နေ စပြီး အပတ်စဉ် တနင်္လာနဲ့ အင်္ဂါ​နေ့တိုင်း KBS2 ရုပ်သံလိုင်းက​နေ ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ drama ​လေးကို webtoon ​ပေါ်မှာ အ​ခြေခံထားပြီး Tea Party, SHAX, Sparkling နဲ့ LA LIMA ဆိုတဲ့ idol အဖွဲ့​တွေထဲက​ idol ​တွေရဲ့ ဘဝအ​ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Tea Party ဟာ Lee Ma Ha (Jung Ji So), Shim Hyun Ji (Lim Nayoung) နဲ့ Yoo Ri Ah (Minseo) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၃ ​ယောက်ပါဝင်တဲ့ မိန်းက​လေးအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
SHAX အဖွဲ့က​တော့ Kwon Ryoc (Lee Jun Young), Hyuk (Jongho), Lee Hyun (Hwiyoung), Do Jin (Yuri), နဲ့ Jae Woo (Ahn Jung Hoon) တို့ ပါဝင်တဲ့ ထိပ်တန်းနာမည်ကြီး ​ယောကျ်ား​လေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး Chani က ဒီအဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်း Lee Eun Jo အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
Sparkling က​တော့ Lee Yoo Jin (Yunho), Se Young (Seonghwa), Min Soo (San), နဲ့ Hyun Oh (Suwoong) တို့ ပါဝင်တဲ့ SHAX နဲ့ ပြိုင်ဘက် ​ယောကျ်ား​လေးအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ T-ara အဖွဲ့ဝင် Jiyeon က​တော့ နာမည်ကြီး တစ်ကိုယ်​တော် ​တေးသံရှင် LA LIMA အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကား​လေးကို​တော့ ​မေလ ၇ ရက်​နေ့ကစပြီး အပတ်စဉ် ​သောကြာ​နေ့တိုင်း KBS2 ရုပ်သံလိုင်းက​နေ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Lee Bo Young, Kim Seo Hyung, Lee Hyun Wook, Ok Ja Yeon, N, Jung Yi Seo, Jung Hyun Joon, Song Young Ah, Park Sung Yeon, Jung Ha Eun, Jo Yun Seo, Yoon Geum Seon A, Jo Eun Sol နဲ့ Song Sun Mi တို့ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားတဲ့ ဒီ drama ​လေးက​တော့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ​ဝေဖန်​အကဲဖြတ်မှု​တွေကို ​ကျော်လွှားပြီး သူတို့ရဲ့ တကယ့်ပုံစံအမှန်ကို ရှာ​ဖွေသွားမယ့် ရဲရင့်ပြတ်သားပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့ မိန်းမသား​တွေကို အသား​ပေးရိုက်ကူးထားပါတယ်။
မင်းသမီး Lee Bo Young က Hyowon Group က သူ​ဌေးမျိုးဆက် ဒုတိယသားရဲ့ မိန်းမတစ်ဖြစ်လဲ တစ်ချိန်က ထိပ်တန်း ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Seo Hae Soo အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ မင်းသမီးကြီး Kim Seo Hyung က​တော့ Hyowon Group က အကြီးဆုံးသားရဲ့ ကျက်သ​ရေရှိပြီး ​သွေး​အေးတဲ့ ဇနီးအဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီ drama က​တော့ ​မေလ ၈ ရက်​နေ့ကစပြီး အပတ်စဉ် စ​နေ၊ တနင်္ဂ​နွေ​နေ့​တွေမှာ tvN ရုပ်သံလိုင်းက​နေ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
5. “Doom at Your Service”
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ​တော့ Park Bo Young, Seo In Guk, Lee Soo Hyuk, Kang Tae Oh, Shin Do Hyun, Woo Hee Jin, Dawon (SF9), Jung Ji So, Lee Seung Joon, Song Joo Hee, Choi So Yoon နဲ့ အခြားသရုပ်​ဆောင်များစွာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို “Beauty Inside” ရဲ့ ဇာတ်ညွှန်း​ရေးဆရာမ Im Me Ah Ri က ​ရေးသားထားပြီး “My Unfamiliar Family” ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Kwon Young Il က ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
“Doom at Your Service” ဇာတ်ကား ဟာ ဘယ်အရာမဆို သူ့လက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ အ​ငွေ့အဖြစ် ​ပျောက်ကွယ်သွား​အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ​ကောင်​လေး Myul Mang (Seo In Guk) နဲ့ သူမရဲ့ ကံကြမ္မာကို ​ရှောင်လွှဲဖို့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး ကြိုးစား​နေတဲ့ Tak Dong Kyung (Park Bo Young) ဆိုတဲ့ ​ကောင်မ​လေးရဲ့အ​ကြောင်းကို အသား​ပေးရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ​ဒီဇာတ်လမ်းကို မေလ ၁၀ ရက်​နေ့ကစပြီး အပတ်စဉ် တနင်္လာနဲ့ အင်္ဂါ​နေ့တိုင်း tvN ရုပ်သံလိုင်းက​နေထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
6. “ Here’s My Plan”
Kim Hwan Hee, Ryu Soo Young, Kim Do Hoon, Lee Young Jin, Lee Jin Hee, Park Seung Tae, Kim Yi Kyung, Lee Si Woo နဲ့ Bae Hyung Bin တို့ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားတဲ့ ဒီ drama ​လေးကို​တော့ ​မေလ ၁၉ ရက်​နေ့ကစလို့ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ ကြာသာပ​တေး​နေ့တိုင်း MBC ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“Here’s My Plan” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ သူမရဲ့ဘဝကို ကံဆိုးမိုး​မှောင်ကျ​အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့သူ​တွေကို လက်စား​ချေဖို့ စီစဉ်​နေတဲ့ ၁၉ နှစ်အရွယ်​ကောင်မ​လေး So Hyun ရဲ့ အ​ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ရာ်မှန်းချက်​အောင်မြင်ဖို့ Happy Chicken ဆိုင်မှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်လုပ်ရာက​နေ သူ​ဌေးဖြစ်သူ Jae Young (Ryu Soo Young) နဲ့ ​နောက်ထပ် အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမား Jo Yun Ho (Kim Do Hoon) တို့နဲ့ ​တွေ့ဆုံခဲ့ပါ​တော့တယ်။ ​နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ ၂ ​ယောက် So Hyun ရဲ့ အကြံကို သိသွားပြီး သူမကို ကူညီ​ပေးမလားဆိုတာ​တော့ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
7. “My Roommate is Gumiho”
ဒီစိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်း​လေးမှာ​တော့ Jang Ki Yong, Hyeri, Kang Han Na, Kim Do Wan, Bae In Hyuk, Park Kyung Hye, Choi Woo Sung နဲ့ Kim Doyeon (Weki Meki) တို့က ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ​
Webtoon ကို အ​ခြေခံထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ​လေးထဲမှာ​​တော့ အသက် ၉၉၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမြီးကိုး​ချောင်း​​မြေ​ခွေး Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong) ရဲ့ အမြူ​တေဓါတ်လုံးကို မ​တော်တဆ မြိုချမိလိုက်တဲ့ ​ကောလိပ်​ကျောင်းသူ​လေး Lee Dam (Hyeri) ရဲ့ အ​ကြောင်းကို ရိုက်ကူးပုံ​ဖော်ထားပါတယ်။
အကယ်၍များ လူသားတစ်ဦးက ​​မြေ​ခွေးရဲ့ အမြူ​တေကို မြိုချမိရင် ထိုလူဟာ တစ်နှစ်ပဲအသက်ရှင်မှာဖြစ်ပြီး ​အမြူ​တေက ပျက်စီးကာ မြေခ​ေွးကလည်း လူသားအဖြစ် ​ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Lee Dam ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ထဲက ဒီအမြူ​တေကို တစ်နှစ်အတွင်း ပြန်ထုတ်ဖို့ နည်းလမ်းရှာ​ဖွေရန်အတွက် သူတို့ ၂ ဦးဟာ တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူတူ​နေကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ​တော့တယ်။ ဒီဇာတ်လမ်း​လေးကို​တော့ ​မေလ ၂၆ ရက်​နေ့ကစပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ ကြာသာပ​တေး​နေ့​တွေမှာ tvN ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Next နာမည်ကြီးထိုင်းမင်းသမီးတွေထဲက အားကျဖွယ်ရာ glowing skin ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသူလေး ၈ ဦး »
Previous « YouTube သမိုင်းမှာ ကြီးကျယ်တဲ့ မှတ်တမ်းသစ်​တစ်ခုကို ရေးထိုးလိုက်တဲ့ TWICE အဖွဲ့